किमाथाङ्का डायरी २ : चिनले राहत पठाउँछ तर, नेपाली चेली रोक्छ « Emakalu Online
विगत दुई वर्षयता कोभिड १९ ले विश्वमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक उथलपुथल गरायो । विकसित देशहरूले पनि ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नु पर्‍यो । तर पनि त्यहाँका सरकारहरूबाट मनग्य राहत र सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू दिएकोले त्यहाँका जनताले त्यति धेरै आर्थिक समस्या व्यहोर्नु परेन ।
नेपाल जस्ता विकासोन्मुख र गरीब देशहरूमा भने जनताको दैनिकी जीवनमा नै ठूलो असर गर्‍यो । कैयौंले रोजगार घुमाएको र कैयौं मानसिक रुपमा विक्षिप्त भई आत्महत्या गरेका खबरहरू सुन्यौं, हेर्‍यौं र पढ्यौं । नेपालको सन्दर्भमा विशेषगरी नेपाल र भारत नाका छेउछाउ र नेपालबाट भारत काम गर्न जाने जमातको दुःख–पीडा, भोगाइ बारेमा धेरै सुन्यौं, हेर्‍यौं र पढ्यौं । तर चीनसँग सीमा जोडिएका सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूको बारेमा विरलै पढ्न, हेर्न र सुन्न पायौं ।
हुन त यो यात्रा संस्मरणमा कोभिड–१९ ले उत्तरी सीमा क्षेत्रमा पारेको पूरै प्रभावहरूबारे चर्चा गर्न सम्भव छैन । तर पनि मेरो यात्राको दौरानमा मेरो आफ्नो यात्रा अनुभवसँगै मैले देखेका, सुनेका र भुईं मान्छेहरूले सुनाएका, राष्ट्रिय मिडियाहरूले छुटाएका विषयवस्तुको उठान मात्र गर्नेछु ।
राहत बाँड्ने चिनियाँ तरिका
२१ अक्टोबर, २०२१ बेलुकीपख चिया अनि तोङ्बा तान्दै हामी फिन्जोक सरसँग गफिंदै थियौं । उक्त साँझ हामीले कोभिड १९ को बारेमा कुरा थाल्यौं । फिन्जोक सरले भने, ‘लकडाउनले यहाँका मान्छेहरूलाई धेरै समस्या पार्‍यो । यहाँका मान्छे काम गर्न उता पारि जाने गर्दछन् । बिहान उता, बेलुका यता नेपाल । लकडाउनमा उता जान पाइएन । आवतजावत रोकियो । निकै कडा थियो लकडाउन । मान्छे मात्र होइन, कुखुरादेखि पशुसम्म यताउता गर्न पाएनन् । एकचोटि यताबाट किनेर लगेको चौंरी भागेर नेपालतिर आयो । पछि उनीहरूले यता खबर पठाएर उक्त चौंरी नेपालमै काटेर खानु तर फिर्ता नपठाउनु भने । उनीहरूले सम्बन्धित धनीलाई त्यसको मुआब्जा दिइसकेको जानकारी दिए ।’
कोभिड १९ को राहतको सन्दर्भ फिन्जोक सरले व्याख्या गर्दै भने, ‘कोभिड १९ को बेला हाम्रो सरकारले केही गरेन, खालि त्यही आधा बोरा चामल, २,४ किलो दाल, दुई पोका तेल, केही साबुन बाहेक राहत पाएनौं । बरु उता (चीन)बाट राम्रो राहत आयो । तर राहत बाँड्दाको तरिका चाहिं गज्जब नै थियो । कोही पनि त्यहाँ जान पाउँदैनथ्यो । पहिला चिनियाँ सेनाले पारिबाट वारि एक ठाउँमा थुपार्‍यो । त्यतिखेर हाम्रो पुलिससँगै हामी माथिबाट हेरेर बस्यौं । नफुट्ने सामानहरू डोजरले पारि अरुणबाट वारि अरुण हामीतिर फ्याँके । अन्य सामानहरू भने उनीहरू सामान छोडेर माथि पुगेपछि मात्र भिडियो कल गरेर सामान यति–यति छ, लिनू भने । अनि मात्र हाम्रो पुलिस र स्थानीयहरू गएर सामान ल्यायौं ।’
कोभिडले उडाएका सपना
सोलु स्थायी घर भएका परिमाण राई किमाथाङ्का आएको चार वर्ष भएको रहेछ । कोभिड शुरु हुन दुई वर्षअघि उनी त्यहाँ आएका रहेछन् । किमाथाङ्कामा राम्रो कमाइ हुन्छ भनेर उनी सोलुबाट पैसा कमाउने सपना बोकेर किमाथाङ्का छिरेका रहेछन् । शुरुवाती दुई वर्ष उनले राम्रै कमाइ गरे । घरतिर पैसा पनि पठाइरहे । जब कोभिड १९ शुरु भयो उनको अवस्था सुखद रहेन । ‘लकडाउनको शुरुको वर्ष यस्तै हो, विस्तारै खुल्ला नि भनेर बसेको दुई वर्ष नै बितिगयो । पारि चीन खुल्ला अनि काम गर्न जाउँला भन्दा भन्दै दुई वर्ष भैसक्यो । हुँदाहुँदा ऋण पनि लाग्यो’, उनले भने ।
उनले अगाडि थपे, ‘अब त ऋण नतिरी जानु पनि भएन, लकडाउन कहिले खुल्ने ठेगान पनि छैन । अहिले जसोतसो गाउँमा हुने फाट्टफुट्ट काम गर्छु । सशस्त्र चौकी निर्माण भइरहेको छ । त्यसको काठ बोक्ने काम गरिरहेको छु । दुई वर्ष बसेर खाने काम भयो, ऋण लाग्यो र अब ऋण तिरेर मात्र सोलु फर्किन्छु ।’ दुई सन्तानका पिता परिमाणले श्रीमतीले पनि छाडेर गएको दुःखेसो पोखे । अहिले बच्चाहरूलाई सोलुका एक जना शेर्पाले काठमाडौंमा अनाथालयमा राखेको कुरा पनि सुनाए । ‘परिमाण’ बोलीवचन र कामको पक्का र इमानदार भएको स्थानीयले बताए ।
आफ्नो दुःखका बीच स्थानीय बीच राम्रो छवि बनाएका राईलाई हामीले किमाथाङ्कादेखि हुङगुङसम्म बाटो देखाउनको लागि ल्याएका थियौं । हुङगुङ पुगेपछि भने सबै बच्चादेखि बुढासम्मले उनलाई चिन्दारहेछन् । हुङगुङ गाउँमा कोही बाटोबाट त कोही फुटबल खेल्ने चौरबाट परिणाम, परिणाम भनेर बोलाउँथे । पैसा कमाएर बालबच्चा पढाउने लेखाउने अनि सुन्दर सपना बुनेका परिणामको सपनाहरू एकाएक कोभिडले तुहाएको महसूस भयो । यस्तो लाग्यो कोभिडका कारणले परिणामले आफ्ना सपनालाई विपनामा बदलेर परिणाम निकाल्न सकेनन् ।
परिणाम जस्ता धेरै पात्रहरूको कथा उस्तै छ । किमाथाङ्काका पासाङ छिरिङ भोटेको पीडा पनि उस्तै छ । तीन सन्तानका पिता उनको पेशा चीन गएर सिकर्मी काम गर्नु हो । कोभिड शुरु भएदेखि विगत दुई वर्षदेखि उनले रोजगारी गुमाएका छन् । उनले आफ्ना छोराछोरीलाई खाँदबारीबाट किमाथाङ्का ल्याएर पढाइरहेका थिए । रोजगारी गुमेसँगै उनीहरूको लागि खर्च जुटाउन मुश्किल भइरहेको छ । कोभिड भन्दा अगाडि उनी पारि गएर दिनको २०० देखि २५० युवान अर्थात् ३२ सयदेखि चार हजारसम्म कमाउँथे ।
हामीसँग पीडा पोख्दै उनले भने, ‘यहाँका हामी भोटे जातिका सबै पारि ९चीन० काम गर्न जान्छौं । त्यसैबाट हाम्रो गुजारा चल्छ । पारि गएन भने पैसाको मुख देख्न मुश्किल छ । पारि बन्द भएकोले सबै सामान तलतिर हटियागोलाबाट खच्चरलाई बोकाएर ल्याउनुपर्छ । भाडा महँगो छ । काम घट्यो तर महँगी बढ्यो । यो कोभिडले त गर्नु गर्‍यो । धेरै समस्यामा पार्‍यो । सीमा खुलेन भने त भोकै रहने अवस्था आउन सक्छ ।’ उनको कामना थियो– भोकमरीले लखेट्नुभन्दा अगाडि सीमा खुलोस् ।
मेरो मनमा धेरै कुरा खेल्न थाले । प्रश्नहरू जन्मिए । उनीहरू र उनीहरू जस्तै पीडितहरूका लागि हाम्रो राज्य हुनु र नहुनुको केही अर्थ छ ? उनीहरूको घाउमा मल्हम कसले लगाउने ? कोभिड–१९ सँग जोडिएका यस्ता हजारौं लाखौं पात्रहरू भेटिन्छन् । कसले खोज्ने ? कसले सम्बोधन गर्ने ? राज्यले अभिभावकको भूमिका खेलेर नागरिकको मन जित्न सक्ला ? मत जित्न जे पनि गर्ने मन जित्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले होला ?
कोभिड १९ महाव्याधि पीडित नागरिक खोजेर उनीहरूलाई सघाउने भन्दा कतिपय नेता, मन्त्री तथा कर्मचारीहरूको लागि कमाउने उत्सव बनेको थियो । यी सबै कुराहरूलाई मनन गर्दा लाग्यो कि हामी कस्तो देशमा जन्मिएका रहेछौं । हामीले कस्तो नेताहरूलाई छानेका रहछौं । मलाई नेता छान्ने हाम्रो योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठाउन मन लाग्यो ।
यस्तो महाव्याधिको बेला पनि कोभिड १९ को स्वास्थ्य सामग्रीमा घोटाला, कोभिड १९ को राहत वितरणमा पनि घोटाला । हामीले कस्तो प्रणाली अवलम्बन गरेका रहेछौं । हामीले कस्तो समृद्धि र सुखी नेपालीको कल्पना गरेका रहेछौं । जहाँ पहुँचवाला र सत्तामा आसीन नागरिकहरू दिन दुई गुणा र रात चार गुणा आर्थिक लाभ लिइरहेका छन् भने परिमाण राई र पासाङ छिरिङ भोटे जस्ता पात्रलाई हातमुख जोड्न धौ–धौ भइरहेको छ ।
आर्थिकसँगै सामाजिक सम्बन्धमा आघात
कोभिडले मानिसको रोजगारीसँगै सामाजिक सम्बन्धहरूमा आघात पुर्‍याएको रहेछ । सीमा क्षेत्रमा एक देशको नागरिक र अर्को देशको नागरिकहरूबीच वैवाहिक सम्बन्ध हुनु वर्षौंदेखिको चलन हो । तराईका नेपालीले भारततिर विवाहवारी गर्ने र हिमालका मानिसहरू चीनतिर वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने अभ्यास ऐतिहासिक कालदेखि भएको पाइन्छ । आठौं शताब्दीमा तिब्बतका स्रोङ्चोङ गोम्पोले नेपाली चेली भृकुटीलाई विवाह गरेको होस् या जनकपुरकी सीता र अयोध्याका राम बीचको विवाहको कुरा होस् वा नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक र नजिकै सीमा क्षेत्रको अर्को देशको नागरिकहरूबीच विवाह गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ ।
त्यस्तै किमाथाङ्कामा कतिपय नेपाली चेलीहरू उता चीनतिर उताका चेली नेपालतिर विवाह गरेका रहेछन् । वैवाहिक सम्बन्ध तिब्बतलाई चीनले अधीकरण पूर्व अत्यधिक मात्रामा भए पनि अहिले त्यो क्रम विस्तारै कम हुँदै गएको छ । दुई तीन वर्ष अगाडिसम्म फाट्टफुट्ट अन्तरदेशीय निरन्तरता भएको पाइन्छ । तर विगत दुई वर्षयता भने कोभिडको कारणले विवाह भएको रहेनछ ।
कोभिड आउनु अगाडिसम्म नेपालीले चीनतिरबाट केटी ल्याउनु भन्दा पनि चीनकाले नेपाली चेली विवाह गरी लगेको पाइन्छ । चीनमा नेपालको भन्दा बढी सुविधा र सहज जीवन भएकोले त्यताको चेली यता विवाह गरेर आउन छोडिसकेका भए पनि नेपाली चेलीहरू भने अझै उता विवाह गरेर जाने गर्दा रहेछन् ।
किमाथाङ्काबाट ८–१० जना चेलीहरूले चिनियाँसँग विवाह गरेका रहेछन् । विवाहपछि बालबच्चा भए पनि उनीहरूले उताको नागरिकता भने पाउन सकेका छैनन् । अझ कोभिडको समयमा बच्चासहित नेपाली चेलीलाई नेपालै फर्काइएको रहेछ । उनीहरूलाई अझै पनि चिनियाँ पक्षले उता जान दिएको छैन । पतिलाई फोन गर्दा पनि कल ट्र्याकिङ गर्ने गरेको उनीहरूको दुःखेसो थियो । यसरी वैवाहिक सम्बन्धलाई चिनियाँ सरकारले कानूनी मान्यता दिन नमानेको दुःखद अवस्था छ ।
अहिले स्थानीय सरकार छ । त्यसैले यी र यावत् अध्यागमन सम्बन्धी सवालहरू स्थानीय तहले संघीय सरकारलाई जानकारी गराई यी समस्याहरू सुल्झाउनुपर्ने देखिन्छ । जसरी सीमा नजिकका नागरिकहरूलाई एक देशबाट अर्को देश आवतजावत सजिलो बनाइएको छ, त्यसरी नै विवाहको सम्बन्धमा पनि नेपाल र चीनबीच वार्ता गरी सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
यी र यस्तै अझै धेरै कुराहरू बुझ्ने र जान्ने इच्छा थियो तर तीन दिन लगातार पानी परेकोले घर बाहिर निस्किन र गाउँ डुल्न सम्भव भएन । अक्टोबर २० को बेलुकीपख पनि सदा झैं भोलि मौसम खुल्यो भने हुङगुङ जानुपर्छ भन्ने आशा साँचेर बस्यौं । तीन दिनको भारी वर्षाले हामी सीमा स्तम्भसम्म पनि पुग्न पाएका थिएनौं ।
२१ अक्टोबर, २०२१ मा बिहानै ५ बजे उठ्यौं । मौसम हेरेको त आकाश छ्याङ्गै खुलेको थियो । ताराहरू चम्केको देखिन्थ्यो । मैले साथीहरूलाई सोधें– ‘आकाश खुलेको छ, के गर्ने ?’ सबैले जाने कुरा गर्नुभयो । चिया पिएर हामी एकछिन चीनसँगको सीमा स्तम्भ पुग्यौं । हामीसँग त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्न सघाउने गरी फिन्जोक सर पनि साथै हुनुहुन्थ्यो ।
भोटखोला वडा नं. १ मा पानी बगिरहेको एउटा खोल्सी छ । त्यसैको आडमा एउटा ठूलो ढुंगामा रातो रंगले पोतिएको पिलरमा १८ नं. लेखिएको थियो । त्यही रहेछ नेपाल र चीन छुट्याउने सीमा स्तम्भ । सीमा स्तम्भ नजिकको खोल्सीलाई सांगाचोक्मा (कामु खोला) भनिंदो रहेछ । त्यसैको बायाँपट्टि रहेछ सीमा । त्यही सांगाचोक हुँदै गोरेटो बाटो जाँदो रहेछ र त्यसपछि त्यहाँबाट गोरेटो बाटोले सीमा छुट्टाएको थियो । हामी केहीबेर त्यही बाटोलाई पछ्याउँदै गयौं र केहीबेरपछि सिमेन्टले बनाएको सिंढी आयो र त्यसमा फलामे बार्दली हालेको थियो ।
त्यहाँ पनि बाटोको दायाँ नेपाल र बाटो बायाँ चीनको क्षेत्र हो भन्ने कुरा फिन्जोक सरले अवगत गराए । यही बाटो भएर तल अरुणसम्म जाने र तलतिरको सिमाना अरुण नदीले छुट्याउने रहेछ । हामी केहीबेर यताउतिका दृश्यहरू कैद गर्दै फोटो खिच्न थाल्यौं र हामी होटलतिर फर्कियौं । होटलमा फर्किने क्रममा वडा अध्यक्षसँग केहीबेर गफगाफ गर्ने हाम्रो योजना थियो तर अघिल्लो राति अबेर सुतेकाले वडाध्यक्ष सुत्नुभएको भन्ने भएपछि गफगाफको अवसर जुरेन ।
त्यसको दुई दिनअघि एकजना बितेका रहेछन् भारी वर्षाले लास एक दिन घरमै राख्नु परेछ र त्यसले गर्दा हामी आउने अघिल्लो दिन मात्र सद्गत गराएर त्यही भोजमा वडाध्यक्ष रात अबेर भएर सुते होलान् भन्ने लाग्यो ।
हामी होटल फर्किने क्रममा बाटोमा एकजना लाबुङ थरका तम्मोर खोले लिम्बु किमाथाङ्काको भोटेनीसँग विवाह गरेर त्यतै बसेका छन् भन्ने जानकारी पाइयो । प्रो।बालकृष्ण माबुहाङ सरले उनीसँग एकछिन कुरा गर्ने इच्छा गरे । उनको घर बाटोमै पर्ने भएकोले ‘सेवारो’ भन्दै बोलाए तर उनी घरमा रहेनछन् र सुँगुरलाई चारो हाल्न गएका छन् भनेर भित्रबाट भने । अनि हामी फर्किन लाग्दा ठ्याक्कै दोबाटोमा उनी एउटा बाल्टी समाएर घरतिर फर्किंदै थिए । बालकृष्ण सर र ती लिम्बु दाजुले केहीबेर लिम्बु भाषामै बात मारे । किमाथाङ्का भोटे समाजमा बस्ने ती लिम्बु दाजुले आफ्नो लिम्बु भाषामा बोल्ने मान्छे भेटिएको खुशी उनको अनुहारमा प्रष्ट देखिन्थ्यो ।
भारी वर्षाका कारण हामी तीन दिन किमाथाङ्कामा रोकिनु पर्‍यो । तीन दिनको किमाथाङ्का बसाइ निकै नै रमाइलो र फलदायी रह्यो । विशेष गरी तीन दिन बास दिनुहुने फिन्जोक सरको परिवार, तीन दिनभरि मीठो भोजन खुवाउनुहुने फिन्जोक सरको श्रीमती (सुम्झ्युङ भोटे), फिन्जोक सरको बधैनी र किमाथाङ्काको बारेमा यति धेरै जानकारी दिनुहुने फिन्जोक सर उहाँहरू प्रति विशेष कृतज्ञता व्यक्त गर्दै फिन्जोक सरको परिवारसँग एउटा ग्रुप फोटो लिएपछि हामी त्यहाँबाट बिहानको ८ बजे हुङगुङतिर लाग्यौं । अनलाईन खबरबाट साभार गरिएको ।